လျှပ်စစ်မော်တာတစ်လုံး အလုပ်လုပ်ပုံ- ဝိသေသနှင့် အားသာချက်များ | Green Renewables များ
ဂျာမန် Portillo | | လျှပ်စစ်ယာဉ်များ
လျှပ်စစ်ကားတွေ အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးတက်နေတယ်ဆိုတာ သံသယမရှိပါဘူး။ ဤအင်ဂျင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန် နည်းပညာများစွာကို တီထွင်လျက်ရှိပါသည်။ သို့သော် လူများစွာ မသိပါ။ လျှပ်စစ်အင်ဂျင် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။.
ထို့ကြောင့်၊ လျှပ်စစ်မော်တာတစ်လုံးအလုပ်လုပ်ပုံ၊ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်၎င်း၏အသုံးပြုမှုတွင်အားသာချက်များကိုပြောပြရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆောင်းပါးကိုဆက်ကပ်ပါမည်။
ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်၊ ရိုးရှင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော လုပ်ဆောင်ချက်၊ ရေခဲသေတ္တာ သို့မဟုတ် ရိုးရာဂီယာပုံးကို မလိုအပ်ပါ။ နှစ်အတော်ကြာအောင် လျှပ်စစ်ကားတွေက လူတိုင်းရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဘက်ထရီအားသုံးကားဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် ခေတ်ကာလ၏ အတိုးတက်ဆုံး ပြုပြင်မွမ်းမံမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Robert Anderson မှ 1839 ခုနှစ်တွင် တီထွင်ခဲ့သည်။. သို့သော် လျှပ်စစ်ကားများ အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်ပုံအကြောင်း သူတို့ သိပ်မသိပါ။
ကားပိုင်ရှင်များသည် လေကာမှန်ဆေးစက်နှင့် ဘရိတ်အရည်လှောင်သည့် တစ်ခုတည်းသော ရေလှောင်ကန်များဖြစ်ကြောင်း Tesla က ကြွားဝါခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကားတစ်စီး၏ လျှပ်စစ်မော်တာသည် သမားရိုးကျ အအေးပေးစနစ် လိုအပ်ရန် လုံလောက်သော အပူကို မထုတ်ပေးသောကြောင့် ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများကို ချောဆီပေးရန် မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းတွင် သမားရိုးကျ clutch ပါသော ဂီယာအုံတစ်ခု မရှိပါ။နှင့် ၎င်း၏ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် အပူချိန်ထိန်းကြောင်း သေချာစေရန် သီးခြား အရည်တစ်ခုလည်း လိုအပ်ပါသည်။
လျှပ်စစ်ကားအင်ဂျင်၏ အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုနိယာမကို နားလည်ခြင်းမပြုမီ၊ ပစ္စတင်များ၊ ဆလင်ဒါများ၊ crankshafts သို့မဟုတ် အိတ်ဇောစနစ်များကို မတွေ့နိုင်သောကြောင့် ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းများကို သိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်စနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းများကို အဓိကအုပ်စု လေးခု ခွဲထားသည်- on-board charger၊ ဘက်ထရီ၊ converter နှင့် motor ကိုယ်တိုင်။ ၎င်းတို့သည် ဘီးများပေါ်ရှိ မိုဘိုင်းအားသွင်းစနစ်မှတစ်ဆင့် ဘက်ထရီအတွင်း အားသွင်းထားသော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ကူးပြောင်းရန်အတွက် ၎င်းတို့တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ ဤသည်မှာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ အခန်းကဏ္ဍဖြစ်သည်-
လေယာဉ်ပေါ်ရှိ အားသွင်းကိရိယာ- ၎င်းသည် AC အားသွင်းပွိုင့်မှ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲကာ ဘက်ထရီထဲတွင် စုဆောင်းရန် တာဝန်ရှိသည်။
Converter: ကျွန်ုပ်တို့သည် အရှိန်မြှင့်နေသည် သို့မဟုတ် အရှိန်လျှော့ခြင်းအပေါ် မူတည်၍ DC မှ AC သို့ စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် တာဝန်ယူပါသည်။ ယာဉ်မောင်း၏ တောင်းဆိုမှုအရ အင်ဂျင်ကို ထိန်းချုပ်ရန်လည်း တာဝန်ရှိသည်။
လျှပ်စစ်မော်တာ: လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ရွေ့လျားမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ အရှိန်လျှော့သည့်အဆင့်တွင်၊ ၎င်းသည် ဘရိတ်စွမ်းအင်ကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ပြီး၊ အရွေ့စွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲကာ ဘက်ထရီထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားသော ဘရိတ်အုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဘက်ထရီ: ၎င်းသည် သေးငယ်သော ဘက်ထရီများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် သိုလှောင်သည့် ကိရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ကားတစ်စီး၏ ဆီတိုင်ကီဖြစ်သည်။
မော်တာအတွင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မော်တာ၏တည်ငြိမ်သောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် stator တစ်ခုအပြင် မတူညီသောအကွေ့အကောက်များ၊ ဤအကွေ့အကောက်များမှတဆင့်ဖြတ်သန်းသောလျှပ်စီးကြောင်းများရှိသည်။ stator တွင် လည်ပတ်နေသော သံလိုက်စက်ကွင်းကို ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။. အလယ်ဗဟိုတွင်၊ ပုံသေသံလိုက်စက်ကွင်းပါရှိသော ရွေ့လျားနေသည့်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် ရဟတ်တစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသည်။ stator ရှိ လှည့်နေသော သံလိုက်စက်ကွင်းသည် rotor ၏ ပုံသေသံလိုက်စက်ကွင်းကို ဆွဲယူကာ လှည့်ပါသည်။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ကားတစ်စီး၏ ဘီးများကို ဂီယာအစီအရီဖြင့် လှည့်ပေးကာ လှုပ်ရှားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
လျှပ်စစ်ကားများသည် ၎င်းတို့၏ အသုံးပြုမှု အဆင့်အမျိုးမျိုးတွင် စွမ်းအင်ကို မည်ကဲ့သို့ စီမံခန့်ခွဲသည်ကို နားလည်ရန်လည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါသည်။ ငါတို့ရှာတယ်။ မောင်းနှင်သူမှ တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်ထားသည့် မတူညီသော အဆင့်နှစ်ဆင့်၊
ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးတွင် အပူအင်ဂျင်နှင့်မတူဘဲ၊ လျှပ်စစ်မော်တာသည် ရွေ့လျားမှုကိုထုတ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် ဘက်ထရီအားသွင်းရန်အတွက် အရွေ့စွမ်းအင် (ရွေ့လျားမှု) သို့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အရှိန်မြှင့်အဆင့် အရှိန်မြှင့်သည့်အဆင့်တွင်၊ တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းပုံစံရှိ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ဘက်ထရီမှ converter သို့ လွှဲပြောင်းပေးပြီး၊ converter သည် ဤလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းမှ လျှပ်စီးကြောင်းသို့ ပြောင်းပေးရန်အတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် အထက်ဖော်ပြပါစနစ်မှတစ်ဆင့် ရဟတ်ကို ရွေ့လျားစေသည့် မော်တာသို့ရောက်ရှိပြီး နောက်ဆုံးတွင် ဘီးများ၏ ရွေ့လျားမှုဖြစ်လာသည်။
အရှိန်လျော့ခြင်းအဆင့်- ဤအဆင့်တွင် လှုပ်ရှားမှုသည် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်သည် ဘီးများနှင့် စတင်ပြီး အရှိန်မြှင့်သည့်အဆင့် ပြီးဆုံးပြီးနောက် ဘီးများသည် အရှိန်မြှင့်စက်မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ခြေထောက်များကို ဖယ်ရှားလိုက်သောအခါတွင် ရွေ့လျားနေပါသည်။ မော်တာသည် ခုခံအားကိုထုတ်ပေးပြီး အရွေ့စွမ်းအင်ကို လျှပ်စီးကြောင်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းပေးကာ converter မှတဆင့် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းသို့ ပြန်ပြောင်းကာ ဘက်ထရီထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည် လျှပ်စစ်ကားများ၏ ပြန်လည်အသက်သွင်းဘရိတ်ဖမ်းစဉ်တွင်လည်း ဖြစ်ပေါ်သည်။
လျှပ်စစ်မော်တာတစ်လုံး အလုပ်လုပ်ပုံကို သိပြီးသည်နှင့် မည်သည့်အမျိုးအစားများ တည်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း (DC) မော်တာ: sအင်ဂျင်အမြန်နှုန်းကို စဉ်ဆက်မပြတ် ချိန်ညှိနိုင်စေရန် အရေးကြီးသော အခြေအနေများတွင် ၎င်းကို အသုံးပြုသည်။ ဤမော်တာအမျိုးအစားတွင် ရဟတ်နှင့် stator တွင် တူညီသော တိုင်အရေအတွက်နှင့် ကာဗွန်ပမာဏတူညီရပါမည်။ DC မော်တာများကို အမျိုးအစားသုံးမျိုး ခွဲခြားနိုင်သည်။
Alternating Current (AC) Motors- ဤရွေ့ကားလျှပ်စီးပေါ်တွင်လည်ပတ်သောမော်တာများဖြစ်ကြသည်။ လျှပ်စစ်မော်တာသည် သံလိုက်စက်ကွင်း၏အပြန်အလှန်အားဖြင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို လည်ပတ်အားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။
လျှပ်စစ်မော်တာအသုံးပြုခြင်းသည် သမားရိုးကျတစ်ခုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိပါသည်။ အဓိက အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ ဆိုတာကို ဖော်ပြသွားပါမယ်။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် (လေစွမ်းအင်နှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်) ဖြင့် ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်ခြေ။
DC brushed motor ရွေးချယ်မှု။
ဒဏ်ရာအကွက် သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းသံလိုက်များပါရှိသော DC စုတ်တံပါသော မော်တာများ။
အလွန်ရိုးရှင်းပြီး အလွန်ထိရောက်သော induction motor ဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ်မော်တာအများစုသည် အချိန်တိုအတွင်း မြင့်မားသောပါဝါကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
လျှပ်စစ်ကားများအတွက် စနစ်များသည် မျိုးဆက်သစ်ဘရိတ်ဖမ်းနိုင်ခြေရှိသော စနစ်များဖြစ်သည်။ ကြယ်ပွင့် & ရပ်ပါ။၊ (ဘရိတ်အုပ်သောအခါ ပုံမှန်ဆုံးရှုံးသွားသော စွမ်းအင်ကို အခွင့်ကောင်းယူနိုင်စေသည်)
ဒါပေမယ့် အကောင်းဆုံး လျှပ်စစ်မော်တာ၊ ၎င်းသည် မျိုးဆက်သစ် ဘရိတ်ဖမ်းသည့် သုံးဆင့် induction နှင့် electronic controller ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အဆိုအရ အလွန်ကောင်းမွန်သော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို ရရှိနိုင်ပြီး လက်တွေ့ကျကျ ညစ်ညမ်းသော ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု လုံးဝကင်းစင်သည့် အင်ဂျင်ဖြစ်သည်။
သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း လျှပ်စစ်မော်တာတစ်လုံး အလုပ်လုပ်ပုံကို လေ့လာခြင်းသည် ဤတော်လှန်ရေးနည်းပညာကို တိုးချဲ့အသုံးပြုမှုကို သေချာစေသည်။ ဤအချက်အလက်ဖြင့် လျှပ်စစ်မော်တာ အလုပ်လုပ်ပုံအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » နည်းပညာအသစ်များ » လျှပ်စစ်ယာဉ်များ » ဘယ်လိုလျှပ်စစ်မော်တာအလုပ်လုပ်တယ်